ဒေါင်းဇာနည်: မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရသည်ပါတီများ ပါတီဆိုင်းဘုတ် ထောင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရသည်ပါတီများ ပါတီဆိုင်းဘုတ် ထောင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က ပါတီ မှတ်ပုံ တင်ခွင့် ပြုပြီး ဖြစ်သော ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲဝင် တည်ဆဲ ပါတီ ငါးခု အပါအဝင် စုစုပေါင်း ပါတီ ၂၉ ပါတီ ရှိပြီ ဖြစ်ရာ ယင်း ပါတီများ သည် ပါတီဆိုင်းဘုတ် ထူထောင်ရန် စတင် လုပ်ဆောင် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း တိုင်း ဒေသကြီးများ အခြေစိုက် ပါတီများ ထံမှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။ ''ကျွန်တော်တို့ ပါတီက အခု ကျိုက္ကဆံလမ်းကို ပြောင်းသွား ပြီ။ အဲဒါ ဒီနေ့ (ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့) ပါတီ ဆိုင်းဘုတ် တင်ဖို့စီစဉ် ထားတာ သတင်းစာ မှာတော့ ပါတီ မှတ်ပုံ တင်ခွင့် ပြုကြောင်း တရားဝင်ကြေညာ ထားပြီး ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီ တရားဝင် အကြောင်းကြားစာ မရောက် သေးတော့ မြို့နယ် ကော်မရှင် မှာ ဆိုင်းဘုတ် တင်လို့ ရမလား စုံစမ်းတော့ သူတို့ဆီ ညွှန်ကြားချက် မရောက် သေးလို့ မတင်ပါနဲ့ဦး ဆိုလို့ ဒီနေ့တော့ မတင်ဖြစ် ဘူး။ ခွင့်ပြုချက် ရတာနဲ့ တင်မှာပါ'' ဟု ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရှင်းပြသည်။
မှတ်ပုံ တင်ခွင့် ပြုသော ပါတီ များကို ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ စ၍ နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ များမှ တစ်ဆင့် တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ထုတ်ပြန် ထားသည့်မှတ်ပုံ တင်ခွင့်ရ ပါတီများ စာရင်းတွင် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲဝင် တည်ဆဲ ပါတီ ငါးခု ပါဝင်ပြီး ပါတီသစ် ၁၉ ပါတီ တွင် ကိုးပါတီ မှာ တိုင်းရင်းသား ပါတီများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို စုံစမ်း ကြည့်တော့ အကြောင်း ကြားစာ ပို့လိုက်ပြီ။ မြို့နယ် ကော်မရှင်ဆီမှာ စုံစမ်းဖို့ ပြောတယ်။ အကြောင်း ကြားစာ ရောက်မှ ဆိုင်းဘုတ် ထောင်ခွင့် ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အခု ထိတော့ မြို့နယ် ကော်မရှင်ဆီကို စာ မရောက်သေးဘူး'' ဟု ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးသိန်းတင်အောင် က ပါတီ ဆိုင်းဘုတ် ထူထောင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားသည်ကို ပြန်လည် ပြောကြား သည်။
ပြည်ထောင်စု ကော်မရှင် က မြို့နယ် ကော်မရှင် ခွဲများ စာရင်းကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် မေလ ၆ရက်နေ့က နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာထား ပြီးဖြစ်သည်။ ''ကျွန်မတို့ ပါတီက ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ဖို့ လုပ်နေ ပါပြီ။ အခု စာပေ စိစစ် နဲ့မှတ်ပုံတင် ဌာနမှာ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ဖို့လုပ်နေတယ်'' ဟု ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (မြန်မာ) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါ်သန်းသန်းနုက ဆိုသည်။၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ အထိ နိုင်ငံရေး ပါတီပေါင်း ၄၂ ပါတီ တည်ထောင် မှတ်ပုံ တင်ခွင့် လျှောက်ထား ခဲ့ပြီး တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသော ပါတီ သစ် ၃၇ ပါတီ တွင် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက် ပွဲဝင် တည်ဆဲ ပါတီ ငါးပါတီ နှင့် ပါတီ သစ်၂၇ ပါတီမှာ ပါတီ မှတ်ပုံ တင်ခွင့် လျှောက်ထား ခဲ့ပြီး ယင်း တို့မှ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲဝင် တည်ဆဲ ပါတီ ငါးခု အပါ အဝင် ၂၉ ပါတီ ကို မှတ်ပုံ တင်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ၏ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ အထိ ထုတ်ပြန်ထား ချက်များ အရ သိရသည်။
၁၀ . ၆ . ၂၀၁၀
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 10:29:00 PM